We.com.mm - တကယ်ချစ်ကြတဲ့ ချစ်သူတွေဆိုတာကို သက်သေပြလိုက်တဲ့ ရဲရင့်အောင် နဲ့ ဧငြိမ်းဖြူ
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဆယ်လီစုံတွဲအဖြစ် ရေပန်းစားနေကြတဲ့ အဆိုတော် ရဲရင့်အောင် နဲ့ မော်ဒယ် သရုပ်ဆောင် ဧငြိမ်းဖြူတို့ အတွဲကတော့ ချစ်သူသက်တမ်း နှစ်နှစ်နီးပါး ကြာပြီဖြစ်သလို သူတိုရဲ့ RS အခြေအနေကလဲ ရန်ဖြစ်လိုက် ပြန်ချစ်လိုက်နဲ့ တကယ်ကို ချစ်ကြတဲ့ ချစ်သူတွေဘဲဖြစ်ပါတယ်။
ဧငြိမ်းဖြူကတော့မနေ့ကပဲ ရုတ်တရက် ရဲရင့်အောင်နဲ့ လမ်းခွဲလိုက်တာကို ပရိသတ်တွေကို ကြေငြာပြီး အသည်းလေးကွဲမလိုဖြစ်ခဲ့တော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ မထင်မှတ်ထားတဲ့ တုံပြန်သံတွေကြားခဲ့ရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လဲ ချစ်သူကို သဲသဲလူပ်ချစ်တတ်တဲ့ ရဲရင်အောင်က ချက်ချင်းဘဲ ပြန်ချော့လိုက်တယ်ပြောရမလား ညတွင်းချင်းကို ပြန်လည်အဆင်ပြေသွားပြန်ပါတယ်တဲ့
ဧငြိမ်းဖြူက ဒီကိစ္စနဲ့ ပက်သတ်ပြီးတော့ “ညတွင်းချင်းပြဿနာဖြေရှင်းခွင့်လေးတောင် မပေးကြဘူးလား .. မနက်ထိတော့ခဏစောင့်ကြည့်အုံးပေါ့ ..ဇွတ်နော်ယူတို့ကလဲ အခုချက်ချင်းပြန်အဆင်ပြေသွားတော့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ Fan လေးတွေပဲ စိတ်ညစ်ရတယ် !! Sry ပါ အဲ့ကြောင့်သူက Interview မှာဖြေတာ သူဘာတင်တင် မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်နေလိုက်ပါတယ်တဲ့ အဲ့ဒါအမှန်ဆုံးပဲ . ကိုယ်ကတစ်ခါတစ်လေ ကျပ်သိပ်မပြည့်ချင်ဘူး :p ” ဆိုပြီး ပြန်လည်အဆင်ပြေသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်း ရေးသားထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ရဲရင့်အောင်ကတော့စိတ်ကောက်တတ်လွန်းတဲ့ချစ်သူလေးရဲ့အကြောင်းကိုသိတာကြောင့်သူဘာတင်တင်မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်လိုက်ပါလို့ ပရိသတ်တွေကို တောင်းဆိုထားဖူးပါသေးတယ်။
တကယ်ချစ်ကြတဲ့ ချစ်သူတွေဆိုတာ ဒီလိုဘဲဖြစ်ရမှာ ဟုတ်တယ်မလား ။
ခရီးသွားဖက်ရှင်တွေနဲ့ လန်းနေတဲ့ Fashion Queen လေး နန်းဆုရတီစိုး
ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို စိတ်ဝင်စားရင် ရင်ထဲမှာ သိမ်းထားတယ်ဆိုတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
ချမ်းမြေ့မောင်ချိုက သီချင်းစာသားမေ့တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့ မိခင်ဒေါ်အိအိ
ဆံပင် စတိုင်လ်အသစ်နဲ့ လှနေတဲ့ ဘေဘီလေး ခင်ဝင့်ဝါ